Kani waa astaantii 2024 Olimbikada Paris | Abuurista khadka tooska ah
Ololkii olombikada ee Olombikada soo socota ee 2024 ee ka dhici doonta Paris laga yaabee in astaanta ay si xad dhaaf ah u jeesatay dhacdadan muhiimka u ah adduunka isboortiga.
Astaanta astaanta u ah Olambikada ku dhowaad 4 sanoIsticmaalka ololka naqshadiisa ayaa ka tagtay qol aad u badan oo dhaleeceyn iyo jeesjees ah oo ka soo baxa shabakadaha shabakadaha.
Ku dhowaad sida tan, Ma goob qurxinta lagu qurxiyo? Xayaysiinta ka hortagga uurka? Oo sidaas darteed tweets-ka leh dhacdooyinka ugu qosolka badan ayaa bilaabay roob. Waana run haddii aad eegto astaanta ololka, waxaad ka heli kartaa bushimaha, timo aad u Faransiis ah; Taas macnaheedu maaha inay taasi ahayd ujeedkii shirkaddu u lahayd caasimadda Paris, laakiin way gudbeen.
Logo des Jeux Olympiques? ee #Paris2024 waa la! pic.twitter.com/092gZjExL0
- Ciyaaraha France tv (@francetvsport) October 21, 2019
Naqshaddan dahabiga ahi waxay ku saabsan tahay "Art Deco" iyo qaabkii ay ahayd markii Paris ay ahayd markii ugu dambeysay ee lagu qabto garoonka Olombikada. Waxaan ka hadlaynaa sanadka 1924 waadna fahmi kartaa wax yar oo ka badan sababta tan ugu soo laabaneyso qaabkaas aan khaldami karin.
Simpsons waxay saadaalinayaan astaanta #Paris2024 pic.twitter.com/0KI20XcQ0W
Mid ka mid ah faahfaahinta xayeysiiska astaanta ayaa ah markii ugu horreysay Waxay u adeegi doontaa Olimbikada iyo Paralympics-ka labadaba. Websaydhada astaantu waxay isticmaashaa ereyada si ay u metelaan labada qaybood ee isla mashruuca, oo ay astaan ​​u tahay hal astaan ​​isla markaana wadaagayaan isla fikradda ah in isboortigu nolosha beddelo.
Dib-u-dhigista calaamadaha ayaa meel walba aaday. Waxaan leenahay xitaa arkay isku ekaanshaha ololka of Tinder, barnaamijka shukaansiga caanka ah. Ama sida ololku ugu egyahay timo jarista ay xidhato Lisa Simpson. Taasi waa in la yiraahdo, waxaa jira isbarbardhigyo badan mana ogin haddii waxa dhabta ah ee aad dooneysay inaad raadiso ay kani yihiin. In astaanta cusub ee loogu talagalay Olombikada Paris ee 2024 ay si dhakhso leh u faafto; ma ilaawno wax kasta oo ku dhacay astaanta Tokyo 2020.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Astaanta cusub ee Ciyaaraha Olombikada 2024 ee ka socota Paris ee bartamaha jees jeeska ah
Sida Loo Sameeyo Kuwaas Sawirada Uruuriyaha Waxay umuuqdaan kuwa nool By hot.kenobi